နေအိမ် » လှုပ်ရှားမှု » Regular Show Fist Punch
ဂိမ်းသတင်းအချက်အလက်များ: Regular Show Fist Punch
ကစား: 102,531 tag ကို: ပုံမှန်ပြပွဲ, Regular Show Games, regular games, regular
အွန်လိုင်းအခမဲ့ဂိမ်း Play: ပုံမှန်ပြသပါ! မော်ဒကဲသည်, Rigby, မာဂရက်နှင့် skip လက်သီးဆုပ်လာကြတယ်2မှာညဇီးကွက်အနိုင်ယူကူညီပါ! အာမခံလာကြတယ်နှင့်လှုပ်ရှားမှု!
ပုံမှန်ပြပွဲဂိမ်း: ပြီးပြည့်စုံသော mowin
ပုံမှန်ပြသပါဂိမ်း: ပြီးပြည့်စုံသော Mowin ။
ထိုသူတို့သည်မိမိတို့အ groundskeepers သည်အတိုင်းပြုပါရန်ရှိသည်ဘာလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခါ, ကမြက်ရိတ်စက်ထဲကယူဖို့အချိန်ပဲ!
ပုံမှန်ပြသပါက Galaxy ကယ်ဆယ်ရေး Squad Impossible Escape ။ သူတို့ပြဿနာသည်သူတို့၏အဆွေခင်ပွန်းကယ်တင်ရန်အလို့ငှာတစ်ဦးအာကာသယာဉ်လုပ်ကိုင်ရန်အဖြစ်ပြင်အာကာသအတွင်း Rigby နှင့်မော်ဒကဲသည် Join ။ အဆိုပါအာကာသယာဉ်လေဆာ, ဗုံးနှင့်အများကြီးပိုတပ်ဆင်ထားသည်။ အမြဲတမ်း, Goo အဖြစ်
ပုံမှန်ပြပွဲ rigbmx 2
ပုံမှန် Show ကို RigBMX 2. Rigby ပြန် RigBMX2မှာဘီးနှစ်ဘီးပေါ်တွင်ပါ! သငျသညျဖြည့်စွက်ရန်အဘို့အခြောက်ယောက်ပျော်စရာနှင့်အလွန်မိပြီအဆင့်ဆင့်ရှိပါတယ်။ ဆင်းအရှိန်မြှင်, ခုန်အားဖြင့်ပျံသန်းနှင့်လာမည့်စစ်ဆေးရေးဂိတ်ရောက်ရန်တစ်လမ်းထွက်တွက်ဆ။ RigBMX 2, Play
ပုံမှန်ပြပွဲအမှိုက် n 'dash 2016
ပုံမှန် Show ကိုဂိမ်း - မော်ဒကဲသည်သို့မဟုတ် Rigby အဖြစ်အမှိုက်ပုံးထဲသို့ N 'Dash အားကစားပြိုင်ပွဲ 2016 Play နှင့်သင်တတ်နိုင်သလောက်အဆင့်တိုင်းကိုရှင်းလင်းဖို့သလောက်အမှိုက်ကောက်။ အတားအဆီးထွက်သည် Watch - နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုမှမီးတောင်, ရေလောင်းစရာဘို့ရေကန်, အနက်ရောင်တွင်းနှင့် lawnmowers ရှိပါတယ်။
နောက်တကြိမ်မော်ဒကဲနှင့် Rigby ဒုက္ခ၌ရှိကြ၏။ ဒါဟာသူတို့ကိုကီးဘုတ်ပေါ်မှာပြထားတဲ့ sequence ကိုအတိုင်းလိုက်နာကူညီမှသငျသညျအထိပါပဲ။ သင်သည်လက်ျာ key ကိုနှိပ်လျှင်သင်မွန်း Monster လျှပ်စစ်လိမ့်မည်, သင်မူကားမှား key ကိုနှိပ်လျှင်သင်အသက်ဆုံးရှုံးပါလိမ့်မယ်။ Re Play
အဘယ်သူသည်အစဉ်အမြဲတည်နေတဲ့ဂေါက်သီးလှည်း parking ဒီစိန်ခေါ်မှုဖြစ်လိမ့်မည်ဟုထင်? မော်ဒကဲသည်နှင့် Rigby ဟာ crashing catastrophe.Play ပိုပြီးပုံမှန် Show ကိုဂိမ်းများနှင့်ကာတွန်းကွန်ယက်ပေါ်တွင်အခြားအခမဲ့အွန်လိုင်းဂိမ်းထဲကသူတို့ကိုယ်သူတို့စီမံကိုင်တွယ်ကူညီပါ။
ပုံမှန်ပြပွဲ vocalno လွတ်မြောက်
ဒီဂိမ်းထဲမှာ, မော်ဒကဲနှင့် Rigby, Vocalno မှလွတ်မြောက်ရန်သူတို့ကို run နှင့်မှလွတ်မြောက်ရန်ကူညီရန်ရှိသည်။
ဒီဂိမ်းထဲမှာ, Rigby မိုဃ်းတိမ်၌လမ်းလျှောက်ခြင်းဖြင့်မော်ဒကဲသည်ကယ်တင်ဖို့ရန်ရှိသည်။ သူ့ကိုကူညီပေးဖို့နဲ့ arrow key ကိုသုံးပါ။
Rigby သို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများမော်ဒကဲဖို့လမ်းပေါ်မှာရပ်နေသောကြောင့်ဤသည်မော်ဒကဲသည်သင်္ချိုင်းတွင်းထဲသို့ကျော်ပြေးခုန်, ပုံမှန် Show ကိုဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်, သတိပြုရကြမည်။
Riggby သူတို့၏စုဆောင်းများအတွက်ရေခဲစုဆောင်းဖို့ချင်တယ်။ သူ့ကိုဒီမစ်ရှင်ပြီးအောင်နှင့်ပိုပြီးရမှတ်ရကိုကူညီပါ။
ပုံမှန်ပြပွဲ: xmas ဆုကြေးဇူးကိုတက်ခူး
Rigby သူ့ကိုအပေါက်ကျော်ပြေးနှင့်လက်ဆောင်များကိုစုဆောင်းကူညီသားသမီးတို့အဘို့ခရစ္စမတ်ဆုလက်ဆောင်စုဆောင်းဖို့ကို run ပါ။
ဒီပုံမှန်ပြသပါဂိမ်းထဲမှာ, မော်ဒကဲသည် Rigby ကယ်တင်ရန်နှင့်လမ်းအပေါင်းတို့၌ပစ္စည်းများကိုစုဆောင်း, သူ့ကိုဒီရယ်စရာပုံမှန် Show ကိုဂိမ်းအပေါင်းတို့၌အဆင့်ဆင့်အပြီးသတ်ကူညီရန်ရှိသည်။
Dimensional နစ်ခုနှစ်, Garrett Bobby ဖာဂူဆန်တစ်တိုင် interdimensional ပြိုင်ကားဂိမ်းသို့တစ်ခုလုံးကိုပန်းခြံလှည့်တော်မူပြီ။ မော်ဒကဲသည်, Rigby တူပန်ကာအကြိုက်ဆုံး, ကြွက်သားက Man, ပေါ်လာနှင့်ပိုပြီးမှသင်၏အကျင့်စရိုက်ကိုရွေးချယ်ပါ။ သင်ကမကြိုက်ဘူးရုံကိုဘယ်လိုသင့်ရဲ့လှည်းစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပါ။ th
ပုံမှန်ပြပွဲဂိမ်း: အိပ်မက်ဆိုး athon
အဆိုပါအိပ်မက်ဆိုး-athon စတင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်! ရီးရဲလ်ဖုတ်ကောင် Zombocalypse 3D တစ်ဦးစိစစ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပြီးကပရိသတ်ကိုကာကွယ်ပေးရန်မော်ဒကဲနှင့် Ribgy အထိပါပဲ။ ကံကောင်းတာက, ကြွက်သားက Man မိမိအဟောင်းလမ်းကြောင်းများနှင့်လယ်ကွင်းအားကစားပစ္စည်းကိရိယာများအပေါငျးတို့သဆောင်ခဲ့ကြ၏။ သေနတ်ထီပစ်, discuse
မြေကြီးတပြင်ကျူးကျော်ရန်အခြားဂြိုလ်မှစက်ရုပ်များကခြိမ်းခြောက်နေသည်, Rigby နှင့်မော်ဒကဲသည်စက်ရုပ်များကိုသတ်ပစ်တဲ့သေနတ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ကိုမစ်ရှင်ကိုအပြီးသတ်လုံခြုံစွာအိမ်ပြန်ကူညီပါ။
အဟယ်လိုညဉ့်အခါ, Rigby ဂူအောက်မှာသကြားလုံးစုဆောင်းဖို့တာဝန်ပေးဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ သငျသညျလက်ဝဲနှင့်လက်ယာ Rigby ရွှေ့ဖို့မြှား keys ကိုသုံးနိုင်သည်။
ပုံမှန်ပြပွဲ rigby ဘီအမ်အိပ်
သင့်ရဲ့ပုံမှန် Show ကို Rigby ဘီအမ်အိပ်အကြံပေးချက်များနှင့်လှည့်ကွက် Share!
ဒီဂိမ်းထဲမှာ, Rigby ကိုဝိညာဉ်တော်မြို့မော်ဒကဲသည်ကယ်တင်ဖို့ရန်ရှိသည်။ သူ့ကိုဒီမစ်ရှင်ပြီးအောင်အပေါင်းတို့နှင့်တကွအဆင့်ဆင့်လွန်ကိုကူညီပါ။
ပတ်ပတ်လည်ကို run regularshow
ဒီဂိမ်းကိုပုံမှန် Show ကိုစီးရီးဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။ Rigby ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်စွန့်စားမှုမြှားကမ္ဘာချင်တယ်။ သူ့ကိုသင့်ရဲ့ mouse ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်အားလုံးအဆင့်ဆင့်အပြီးသတ်ကူညီပါ။
ဒီဂိမ်းထဲမှာ, Rigby နှင့်မော်ဒကဲသည်ရေခဲခေတ်မှပြန်လာသော, သူတို့ရဲ့စိန်ခေါ်မှုမြစ်ပေါ်တွင်ရေခဲကိုတက်ခုန်ခြင်းဖြင့်ရေခဲမြစ်များကိုကျော်လွှားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဂိမ်းအားလုံးအဆင့်ဆင့်ကိုဖြည့်ဖို့ Rigby Dexter ကိုကူညီပေးပါ။
သငျသညျ Flappy Bird ကိုကစားလိုပေမယ့်ဒီဂိမ်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ကာတွန်းကွန်ယက်အတွက်ပုံမှန်ပြသတီဗီစီးရီးအတွက် Rigby နှင့်မော်ဒကဲသည်တွေ့ဆုံရန်ပါနဲ့။ သူတို့ကိုသင့်ရဲ့ mouse ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်နှဲကျော်ပျံသန်းကိုကူညီပါ။ ကံကောင်းပါစေ!
မော်ဒကဲသည်မြို့အတွက်အားလုံးဂိုဏ်းကိုတိုက်နှင့် Rigby ကယ်တင်ရန်ကိုကူညီပါ။
ပုံမှန်ပြပွဲ canon လှံကို
ဒီမြစ်၌, Rigby နှင့်မော်ဒကဲရွာ rescure ဖို့အားလုံးကိုနဂါးတိုက်ခိုက်ဖို့ရန်ရှိသည်။ သူတို့ကို canon အတွက်အားလုံးရန်သူပစ်ကိုကူညီပါ။
စစ်ပွဲ Paint အအုပ်စုများအကြားတစ်ဦး All-ထွက်ရန်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရွေးချယ်မှု၏ paintball လက်နက်ဖမ်းပြီးနှင့်သင်၏အသင်းများအတွက်နယ်မြေတောင်းဆိုဖို့ multiplayer ပွဲစဉ်သို့ခုန်။ အင်အားအကောင်းဆုံး paintball စစ်သည်တော်ဖြစ်လာအသစ်လက်နက်နှင့်ပစ္စည်းများကိုဝယ်ကြလော့။ ကွဲပြားခြားနားတဲ့ gam ကိုင်တွယ်